Jereo ny tsangambato tsara indrindra any London | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | tanàna, Londres
London dia iray amin'ireo fitsidihana malaza indrindra rehefa manao dia kely. Tanàna tena mahaliana izy io, misy tsena lehibe sy tsangambato mahatalanjona. Tsy isalasalana fa maharitra andro maromaro ny fahitana izay rehetra liana amin'ity toerana ity, noho izany dia hiresaka momba ireo tsangambato lehibe ao aminy isika.
ny Ny tsangambato any Londres dia any amin'ny faritra samihafa amin'ny tanàna, saingy misy maro amin'izy ireo izay lavitra ny diany, ka mora hita izy ireo. Tsy misy olona tsy miraharaha ilay Westminster Abbey na ny Tower of London, ka mamporisika anao izahay hanao lisitr'ireo tsangambato lehibe ao aminy.
3 Tilikambon'i Londres
4 Abidia Westminster
5 Lapan'i Westminster
7 Katedraly San Pablo
8 Ilay tsangambato
Big Ben no fomba Tilikambo Fiambenana ao amin'ny tranon'ny Parlemanta. Ity tilikambo ity dia iray amin'ireo marika misolo tena indrindra ny tanàna ary iray amin'ireo zavatra tokony ho hita aloha. Lakolosy lehibe io tilikambo io, izay misy ao anatiny. Ampirisihina handany andro aman'alina, rehefa manazava izy. Marina ny feon-kira ary avoaka isan'andro amin'ny radio BBC, satria izy ireo dia miresaka momba ny ora ao an-tanàna.
Ity no fonenan'ny British Royal Family tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Azo atao ny mitsidika azy ao anatiny mandritra ny volana vitsivitsy. Ny iray amin'ireo zavatra manandanja indrindra izay mahatonga ny mpizahatany mivory eo alohan'ny lapa dia ny fiovan'ny mpiambina malaza, izay fizahana iray tokoa. Manomboka amin'ny volana Mey ka hatramin'ny Jolay dia atao isan'andro amin'ny 11:30 maraina ary ny andro ambiny dia atao isan'andro hafa izany, ka saika tsy azo atao ny tsy mahita azy io. Mila mandeha kely mialoha ianao, satria mpizahatany maro no mivory mahita azy ary mila mitady toerana tsara ianao hahitana ny matso sy ny fanovana amin'ny fomba fijery tsara.
Ny Tilikambon'i Londres dia manana tantara maizina, ary izany no izy tranomaizina nandritra ny 900 taona izay nanidiana ireo nanafintohina ny mpanjaka. Toa nampijaliana izy ireo teto ary noho izany antony izany no ahatsiarovana azy ho zavatra maizina teo amin'ny tantaran'ny tanàna. Ao anatin'ny Tilikambon'i Londres dia ahitanao ny satro-boninahitra satro-boninahitra misy sabatra na satro-boninahitra taloha, izay iray amin'ny faritra tsara indrindra amin'ny tilikambo. Ny White Tower no trano afovoany sy toerana fananganana tranainy indrindra. Ity tilikambo ity koa dia lapan'ny Medieval ho an'ny mpanjaka ary izany no antony ahitanao ny faritra voatokana ho an'ny efitrano. Ny goaika izay ao amin'ny Tower of London dia miavaka, satria misy aza ny olona iray izay niandraikitra ny fikarakarana azy ireo, satria nilaza ilay angano fa raha tsy hita izy ireo dia hirodana ilay tilikambo.
Ity iray ity Abbey no tempoly tranainy indrindra any London ary any akaikin'i Big Ben no misy azy. Ao amin'ny trano ankehitriny ianao dia afaka mahita mazava ny fomba Gothic. Hetsika lehibe no nitranga teto, toy ny fandevenana ny Princess Diana any Wales. Ao anatiny no ahitanao ny mari-trano antonony voatahiry tsara, ary koa ny mausoleum sy fasan'ny olona malaza, toa ilay antsoina hoe zoron'ireo poety, izay nandevenana an'i Charles Dickens na Shakespeare. Ny toerana mahaliana hafa dia ireo jirofo tsara tarehy sy ny seza fiandrianan'i San Eduardo.
Talohan'ny fananganana ity dia nisy lapa, izay nijaly tamin'ny afo tamin'ny 1834. Ny ampahany kely tamin'io lapa io ihany no voavonjy, toy ny jirofo na ny Westminster Hall. Ity lapa ity dia azo tsidihina amin'ny asabotsy mandritra ny fahavaratra, ka tsy ny olon-drehetra no afaka mahita an'io, satria mora kokoa ny sidina amin'ny fotoana hafa.
Este drawbridge Victoria Io dia iray amin'ireo tandindon'i London. Mahavariana raha jerena akaiky, noho izany dia ilaina ny mandeha mamaky azy io. Azonao atao ny mitsidika ny atitany, mahita ny fomba fiasan'ny rafitry ny tetezana tamin'ny nanamboarana azy. Ity tetezana ity dia eo akaikin'ny Tower of London, ka afaka manao fitsidihana miaraka ianao.
Katedraly San Pablo
La Katedraly St. Paul no faharoa lehibe indrindra manerantany, na dia manaloka azy aza ireo tsangambato hafa ao an-tanàna. Ny dome goavany no zavatra miavaka indrindra, izay hita avy lavitra. Ity dia teboka iray hafa azo tsidihina ao anatiny, ny fahitana ny dôtany lehibe, fiakarana tohatra vitsivitsy, na ny crypt eo ambany.
El tsangambato fahatsiarovana ny afo lehibe tany Londres naorina tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo. Izy io dia tsanganana iray izay mampatsiahy ny afo lehibe tamin'ny 1666, izay nandrava ny ampahany lehibe tamin'ny tanàna ary avy eo tsy maintsy niarina indray. Azonao atao ny miditra ao anatiny ary mianika tohatra miolaka 311 dingana hianika mankany an-tampony, izay ahitanao fomba fijery tsy mampino.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Mari-toerana London